WAR DEG DEG AH : Madaxweynaha Somaliya oo Si deg deg ah ugu yeeray RW Kheyre | Nabadqaad Online & VOA SOMALI
WAR DEG DEG AH : Madaxweynaha Somaliya oo Si deg deg ah ugu yeeray RW Kheyre
Madaxweynaha dawladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hadda kulan deg deg ah oo aan cidna kuwehlin la leh Wasiirkiisa koowaad Xasan Cali Kheyre, kaas oo ku soo beegmay xili duufaanada siyaasadeed ay gaareen heerkii ugu sareeyey oo waxyeeleyn lahayd Madaxweynaha sharafta iyo sumcadda u bulshada ku dhex leeyahay.
Mid kamid ah Lataliyaasha gaarka ah ee Ra`iisulwasaaraha Soomaaliya ayaa usheegay Warbaahinta gudaha in uu kulankan yahay mid gaar ah oo uu Raysalwasaaruhu diiday in ay cidna u raacdo shirkan uu la leeyahay Madaxweynaha dalka.
Warar hoose ayaa sheegaya in Madaxweynaha Soomaaliya subaxnimadii hore ee saaka la kulmay Lataliyaashiisa gaarka ah iyo guddi gaar ah oo uu howshan si hoose ugu xilsaaray sidii xal looga gaari lahaa, waxayna isku afgarteen in uu labada dhinacba si buuxda ula kulmo, una soo jeediyo waxa sharciga dalku qabo cidii diidana talaabo laga qaado.
Madaxweynaha Soomaaliya wuxuu u yeeray kulankii ugu horeeyey gudoomiyaha baarlamaanka Prof Maxamed Sh Cismaan Jawaari, oo aan ilaa hadda la aqoon waxyaabaha ay ka wada hadleen, laakiin Jawaari wuxuu u sheegay saxaafadda in ay aqbaleen dalab uga yimid Madaxweynaha oo ah in uu xaajadan gacmaha la galo.
Mr, Kheyre oo la rumeysan yahay in uu leeyahay damac weyn oo siyaasaded ayaa hadda cagaha la galay dabino adag oo siyaasaded, waxaana haddii uusan aqbalin warka Madaxweynaha oo ah in aan cidna bixin ee Xukuumadu faragalinta ka dayso baarlamaanka, ay dhici doonto in uu waayo garab weyn oo uu horey uga helayay wasiiradiisa qaarkood.